Maxaa looga hadli doonaa shirka u furmay Itoobiya iyo maamulka Galmudug? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa looga hadli doonaa shirka u furmay Itoobiya iyo maamulka Galmudug?
Maxaa looga hadli doonaa shirka u furmay Itoobiya iyo maamulka Galmudug?
Wardheer (Caasimadda Online) – Wasiirka Amniga Galmudug Md. Axmed M. Fiqi oo ka mid wafdi wasiirro iyo taliyaha ciidamada Nabadsugidda Galmudug oo booqasho ku jooga magaalada Wardheer ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa kulamo kula qaatay wafdi uu hogaaminayo dhiggiisa Hogaanka Nabadgalyada Dawlad deegaanka Dr. Xuseen Qaasim iyo taliyaal ka socda ciidamada Qaranka Itoobiya iyo kuwa dawlad degaanka ee Liyuu Booliska.
Labada wafdi ayaa yeeshay kulamo muhiim ah oo ku saabsan, nabadgalyada xuduudaha, qiimayn heshiisyo amni oo horay labada dhinac ay u kala saxiixdeen, dhacdooyin amnidarro iyo isku dhacyo maleeshiyaad ku dhexmaray xadka labada dal ee ku aaddan labada maamul iyo sidoo kale sidii la isaga kaashan lahaa amniga xuduuda dheer ee labada maamul u dhexeysa iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada iyo kuwa gacansaarka la leh.
Kulamada ayaa weli soconaya ayadoo mas’uuliyiinta labada dhinac ay qodobada intooda badan isla fahmeen, qodobada dhimanna maantay laga sii wada hadli doono.